CaveExpress, lalao sehatra 2D mahazatra | Ubunlog
CaveExpress dia un platformer 2D mahazatra napetraka tamin'ny vanim-potoana talohan'ny tantara. Milalao toy ny toetra miakanjo toy ny zohy. Ilaina ny fahavelomana, satria te hamono anao ireo dinôzôro, mammoth ary trondro goavambe.
Mandritra ny lalao dia hofehezintsika ny milina manidina ampiasain'ny pedal ary vita amin'ny tady, ravina ary hazo. Ho tanjona amin'ny misiona rehetra, tsy maintsy manangona ireo boaty isika ary mamindra azy ireo amin'ny teboka manokana. Toa tsotra izany, nefa fahaizana farafahakeliny ilaina mba hahazoana antoka fa afaka mifehy ny milina manidina isika, nefa tsy mikapoka ny gorodona na ny valindrihana amin'ny lava-bato amin'ny hery be loatra. Raha tsy mahomby ianao dia ho simba tanteraka ny fahasalaman'ny toetranao. Ny fizika amin'ny lalao dia niasa tsara ary hanao izay hahasarotana anao.
Ho fanampin'ny fisorohana ireo biby ary alao antoka fa tsy hianjera avy amin'ny haavo avo loatra isika, tsy maintsy hamita ireo asa izay misy ny fitaterana fonosana sy mpandeha izahay. Satria tsy azo ihodivirana ny fianjeran'ny rindrina fa mitranga amin'ny tranga maro izany dia hihena ny fahasalaman'ny toetra. Soa ihany, amin'ny iraka maro dia hahita vato isika, izay rehefa alatsaka amin'ny hazo, dia hitarika fianjerana izay hamela antsika hamerina amin'ny laoniny ny fahasalaman'ny toetrantsika kely.
1 Toetra mampiavaka ny CaveExpress
2 Mametraka CaveExpress amin'ny Ubuntu
2.1 Topi-maso vetivety amin'ny lalao
Toetra mampiavaka ny CaveExpress
Ny lalao dia manasongadina a Multiplayer mode izay mamela mpilalao 4 miara-miasa hamaha ny sarintany.
Ahitana sary ny sary antsipiriany marobe, ary ny vokatry ny taonan'ny vato manampy rivo-piainana amin'ny lalao izy ireo.
Afaka manao izany isika mamorona fanentanana sy sari-tany miaraka amin'ny mpanova ny sarintany tonga soa izany.
CaveExpress dia manolotra fihodinana voalohany amin'ny platformer. Misy tanjona isan-karazany tsara ankoatry ny fanangonana boaty. Ny ambaratonga sasany dia mitaky antsika hitaterana mpandeha, handefa zavatra ao anatin'ny fe-potoana manokana, hamakivaky ny vatolampy, ny rano, sy ny maro hafa.
Manana motera fizika izy io izay hahatonga ny raharaha ho sarotra kokoa, mba hanasarotra ny lalao.
CaveExpress dia misy amin'ny Gnu / Linux, Android, MacOSX, Windows ary HTML5.
Ny kaody ho an'ity lalao ity dia hita ao amin'ny GitHub.
Mametraka CaveExpress amin'ny Ubuntu
Ho an'ny rafitra Debian / Ubuntu misy fonosana azo alaina ao amin'ny trano firaketana. Noho io antony io, ny fametrahana ity lalao ity dia tsotra toy ny fanokafana terminal (Ctrl + Alt + T) ary fanatanterahana ny baiko ao aminy:
Vantany vao vita ny fametrahana, mba hampandehanana ny lalao dia tsy maintsy tadiavo ny mpandefa ao amin'ny ekipanay.
Ny tena tanjon'ny CaveExpress dia ny manangona ireo fonosana ary avelany eo amin'ny ora fanaterana.
Afaka mahazo teboka sy kintana bebe kokoa isika amin'ny fomba haingana hitantanantsika ny asa nanendrena antsika. Afaka mahazo teboka fanampiny ihany koa isika rehefa manaitra dinôzôro.
Ny fikapohana mafy ny rindrina dia mety hiteraka fianjeran'ilay milina manidina antsika, izay hahatonga antsika tsy maintsy hanomboka indray.
Miankina amin'ny haavon'ny fahasarotana nofidinao dia mety mila mamerina ny haavony ianao raha very ilay izy fiainana telo no misy isaky ny fampielezana.
Afaka mitondra fonosana maromaro isika amin'ny fotoana iray, fa izany dia hahatonga ny fifehezana ny milina manidina ho sarotra be.
Mametraha vato akaikin'ny teboka fanangonana dia afaka manampy antsika rehefa manandrana mametraka ny fonosana amin'ny toerany isika.
Afaka mitantana ny toetrantsika isika ampiasao ny lakilen'ny zana-tsipika hifehy ny toetra amam-panahy ary ny habakabaka hamoahana ny entana angoninay.
Para esory amin'ny ekipanay ny lalao mila manokatra terminal fotsiny isika (Ctrl + Alt + T) ary manao ilay baiko:
Ao amin'ny lalao dia afaka mahita tutorial izay ahazoana fahatokisan-tena afaka milalao miaraka amin'ny antoka. Raha mila fampahalalana bebe kokoa momba ity lalao ity dia afaka manatona ny tranokalan'ny tetikasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » CaveExpress, platformer 2D mahazatra
fiteny dia hoy izy:
Adala aho mitady ilay fiteny ary na aiza na aiza dia tsy miresaka inona izany fa mandika aho fa amin'ny anglisy ihany fa tsy amin'ny Espaniôla.
Mamaly an'i Idiomam
Nomena ny dingana lehibe voalohany: efa mampiasa Linux 21.04 ny Ubuntu 5.11